CALENDULA: ISTICMAALKA, GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGA - DHIRTA DAWOOYINKA
Calendula waa warshad isbitaal ah, oo loo yaqaano marigolds. Dhirta ubaxu waxay ubaxyada ubaxyada casaan-jaale ah ku ciyaaraan kaalin muraayad ah oo ku taal floriculture, laakiin qiimaha ugu muhiimsani waxay ku jiraan sifooyinka wanaagsan ee la heli karo.
Daawada dadweynaha, sifooyinka wanaagsan ee calendula waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cuduro kala duwan. Iyada oo ay ku caawiso, iyo daroogooyinka kale, dib u soo cesho caafimaad ka dib jirro culus. Sidoo kale, ubaxa waxaa loo isticmaalaa karinta iyo kiknoolajiyada.
Ma taqaanaa? Calendula way ku caawin kartaa dagaalka lagula kaco cayayaanka caanka ah ee beerta - Xamoorada Colorado. Haddii goobta la dhexgeliyo marigolds wareegga wareegga, ka dibna urka dhirta this ka cabsan cayayaanka.
Halabuurka kiimikada ee kalandar
Qalabka daawada ee calendula sabab u ah ka kooban kiimikada. Warshadda waxaa ku jira maaddooyinka bayoolojiga ah ee soo socda:
saliidaha lagama maarmaanka ah - burburin oo la joojiyo horumarinta jirooyinka;
flavonoids - kicinta wax soo saarka, dhiirigelinta bogsashada boogaha calafka, ka nastaraan murqaha isku dhafan, dhexdhexaadinta iyo ka saarida walxaha waxyeelada leh jirka, ka hortagga burooyinka, yareeyaan barar;
guurka - gacan ka geysta in laga takhaluso caabuqyada kala duwan;
carotenoids (jadwalka) - synthesis pigment kor u qaadida fitamiin A;
triterpenoids - kooxo ka mid ah waxyaallaha bixiya sifooyinka anti-bararka ubaxa, yareeya heerarka kolestaroolka, waxay wanaajiyaan gudbinta dareen-celinta dareemaha;
sterols - khamriga oo la mid ah dhismaha kolestaroolka, kaas oo ka gudba nidaamka dheef-shiidka, ayaa loo nuugaa halkii ay ka dhigi lahaayeen, taas oo hoos u dhigeysa heerka kolestaroolka jirka.
Marigold dawooyinka waxaa ku jira qaybo badan oo raad raac ah. Zinc - waxay xoojisaa xoojinta nidaamka difaaca jirka, selenium - waxa uu ka hortagaa samaynta unugyada qaliinka, hagaajiya nidaamka wadnaha, wuxuu xoojiyaa nidaamka difaaca.
Molybdenum - waxay ka hortagtaa dhacdooyinka maqaarku, waxay xiraan foloraydhka. Copper - wuxuu ka caawiyaa ka hortagga caabuqa. Calendula waxaa kale oo ku jira waxyaabaha sida potassium, calcium, birta iyo magnesium.
Qalabka daawada ee calendula
Calendula waxay ogaatay sifooyinka wanaagsan. Waxay leedahay antiseptic, anti-bararka iyo saameynta xanuunka.. Caawinaadeed, waxaad ku dhaqmi kartaa nidaamyo kala duwan oo jirka ah. Daaweyntu inteeda badani waxay qaadatay dambiilo ubax ah oo dhir ah. In yar ayaa laga soo saaraa casiirka iyo isticmaal caleemaha iyo xididdada.
Daaweynta cudurrada mareenka sare ee neefta iyo afka
Calendula wuxuu daweeyaa cudurrada mareenka sare ee neefta iyo xajmiga afka. Tani waxay suurtogal u tahay waxqabadka bactericidal ee geedka. Xakamaynta Calendula waxay burburisaa streptococci iyo staphylococci.
Wixii afuufaya afkiisa iyo diirinta cunaha waxaa loo isticmaalaa tincture calendula, qaabkeeda la badhxay ama qaabaynta ubaxyada calendula. Dhibaatadani waxay wax ku ool u tahay cunaha xanuunka, infakshanka fayraska ah ee neefsashada, hargabka, qabow. Horumarin degdeg ah oo ka soo kabashada jeermiska bakteeriyada iyo fayraska.
Sidoo kale, tincture calendula waxay ku habboon tahay in la cuno cudurada mareenka neef-mareenka iyo godka afka.
Si boronkiitada, isticmaalka ubaxyada calendula ayaa lagu muujiyey. Waxaad qaadan kartaa dhowr jeer maalintii. Saameyntu waxay ka soo kabsanaysaa cadaadiska ka soo tincture ee marigolds.
Waa muhiim! Calendula kaligeed kuma bogsanayso cudurada halista ah sida dhuun xanuun. Waxaa loo adeegsanayaa sidii laysugu daro antibiyootikada iyo daroogada sulfa.
Calendula wuxuu gacan ka geystaa ka saarista geeddi-socodka kala duwan ee maqaarka, bogsashada nabarrada, uur qaadidda.
Si aad tan u sameyso, waxaad isku diyaarin kartaa isku darka soo socda: Qaado nus koob oo ubaxyo ah, hal koob oo biyo ah karkariyo iyo walxo qadar ah. Markaas, ku shub biyo karkaraya ubaxa, ku adkeyso 2 saacadood, ka dibna adkee maraq iyo ku dar Vaseline in ay. Isku-darkaani wuxuu ku dhuujin karaa meelaha maqaarka.
Si loo daweeyo boogaha, ku dabool tincture spirit of calendula. Diyaarinteeda waxay u baahan doontaa hal galaas oo ubaxyo cusub ah iyo 50 garaam oo khamri ah. Markaad isku dhafaneysid qaybahaas, iskuday 2 wiig. Markaad isticmaasho waa lagama maarmaan in la qaato maro yaryar oo maro ah, qoyan tincture una ku rid isku kari ilaa 15 daqiiqadood. Nidaamka waxaa lagu soo celiyaa 3-4 maalmood.
Kalendar kale ayaa loo isticmaalaa in laga takhaluso finanka. Tan waxaa loo isticmaalaa iyada oo la leh celandine, kuwaas oo ah casiirka celandine iyo kaabiga kalendula waxaa la qaataa (marka la barbardhigo jaanisyada) iyo maalin kasta waxaa laga codsadaa burooyinka 5-7 daqiiqo, illaa dhammaadka buuxa ee qaababka.
Cudurada nidaamka wadnaha iyo xididdada
Iyadoo tiro badan oo ah cudurrada wadnaha, calendula waxay gacan ka geysan kartaa wanaajinta xaaladda guud ee jirka, iyadoon wax saameyn ah lahayn.
Calendula waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhibaatooyinka soo socda habka wadnaha iyo xididada:
Tachycardia waa xaalad muujinaysa wadna garaacid degdeg ah;
Arrhytmia - garaaca wadnaha oo aan degganeyn;
Neefsashada oo gaabis ah;
Daaweynta cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka
Decoction calendarka iyo tincture calendula waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada nidaamka dheefshiidka. Niyad-jabka iyo bogsashada-bogsashada waxay caawiyaan caloosha iyo mindhicirrada la qabsada xanuunka iyo boogaha. Calendula sidoo kale waa mid aad u faa'iido leh ee dagaalka ka dhanka ah cudurrada gallbladder.
Si aad uga takhaluso caloosha, waad karin kartaa isku dar ah hal casiir liin ah, 100 ml oo biyo ah iyo saddex qaado oo ubax ah oo la qalajiyey. Calendula ku shub biyo karkaraya, ka dibna ku cadaadi weel gaar ah iyo casiir liin leh.
Waxay weli ku sii adkeynaysaa faleebo ah ee calendula oo isku daraan casiirka la soo jeediyey. Cabitaanka daawadan ka hor wakhtiga jiifka. Si natiijooyin lagu kalsoonaado, isticmaal 2-3 maalmood oo isku xigta. Isku darkaani wuxuu si fiican u caawiyaa mindhicirka.
Cudurada habka kaadida
Calendula wuxuu kaa caawin doonaa in laga takhaluso cystitiska iyo cudurrada unugyada.
Haddii ay dhacdo cystitis, ciddiyaha dawada waxay yareyn doonaan dareenka xun iyo dareenka xanuunka. Waxaa lagama maarmaan ah in la helo cabitaanno badan oo shaah ah iyo cunto. Si aad u diyaariso maraq waxay u baahan doontaa 4 qaado oo ubax ah iyo 400 ml biyo karkaraya. Flowers waxay u baahan tahay inay ku shubaan biyo karkaraya iyo ku adkeyso 1.5 saacadood meel gudcur ah, ka dibna cadaadis oo si joogto ah u qaado maraq.
Decoction Tani waxay ku habboon tahay cudurada kaadida, laakiin xitaa ka fiican si loo diyaariyo faleebo ee calendula leh duurjoogta duurjoogta ah.
Daaweynta cudurada haweenka
Calendula waxay ka caawisaa sidii ay ula qabsan lahayd dhiigbaxa uterineinka iyo geedi socodka bararsan ee kala duwan ee xubnaha taranka. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta nabarrada afka ilmagaleenka, xakameynta iyo menopause (si loola dagaallamo niyadjabka niyadda, "xayeysiis").
Warshad waxaa loo qoraa qoyaan, maadaama ay si wax ku ool ah u saarto dareemada xun, ka caawinta in laga takhaluso cuncunka iyo cuncun inta lagu jiro geedi socodka bararka. Si kastaba ha noqotee, waa in la fahmo in calendula kaligiis aysan daaweyn doonin cudurka, laakiin kaliya ciladaha soo ceshada.
Beddelka shidaalka, waxaad isticmaali kartaa shumacyada kalendula. Waxay qabaan saameynta anti-bararka iyo nabarka-bogsashada, iyo sidoo kale burburinta maadada.
Saliidulada calendula ee daaweynta cudurrada dumarka waxaa lagu soo ogaadey baaritaanka cudurrada "colpitis", "vulvitis", nabarrada ilmo galeenka, caadada xanuunka, xinjirowga.
Sidee si habboon u uruurisaa oo u dukaamisaa ubaxyo kalendula
Si ay ubaxyada calendula u keenaan faa'iidada ugu badan, waxaa jira xeerar gaar ah oo ku saabsan ururinta. Tusaale ahaan, waxaa loo bilaabaa sida ugu dhakhsaha badan ee ubaxa ee geedka bilaabmaa. Tani waa qawaaniinta ugu muhiimsan, haddii kale ubax ayaa lumin kara midabkooda. Marka ubaxyada aan la qaadin waqtigii loogu talagalay, si adag ayaa loo burburiyaa inta lagu jiro qalajinta, taas oo ka dhigaysa alaabta ceeriin ee tayada liita oo aan habooneyn.
Waxaa lagama maarmaan ah in la qalajiyo maroojisto daaweyn ugu dambeyn 3-4 saacadood ka dib ururinta. Ka dib qalajinta, ubaxa waa in lagu dhejiyaa dhar ama bacaha warqadda. Waa in lagu keydiyaa meel laga ilaaliyo qoyaanka heerkulka qabow.
Sidoo kale qodob muhiim ah oo lagu keydiyo - qayb ka mid ah calendula oo laga helo geedo kale. Warshadda waxaa lagu kaydin karaa muddo aan ka badnayn laba sano, tan iyo wakhtigaan ka dib, hantida faa'iidada leh ee ubaxyada calendula ma sii shaqeyn doonto.
Diyaargarowga daawada oo ku saleysan kalendaar
Iyada oo ku saleysan calendula soo saaray badan oo badan oo daawooyinka daawooyinka. Waa qayb ka mid ah tinctures, kiniiniyada, budada, kiriimka iyo boomaatada. Intaa waxaa dheer, in farmashiyaha aad ka iibsan kartaa ubax ee warshadda, loo isticmaalo diyaarinta of infusions iyo decoctions.
Diyaargaroobidda daawada oo ku saleysan kalendaar:
Tincture calendula - loo isticmaalo bogsashada dhakhsaha ah ee nabarrada, jarista, dhuun xanuunka si ay u nadiifiso (qaabka loo qoynay), saameynta choleretic (oo ku jirta gudaha dhibco);
Kaleflon - kiniinno leh ubax marigold, oo loogu talagalay gumaacad, boog-gariirka, boogaha duodada, bararka miyir-beelka iyo kaadiheysta. Kiniinnadu waxay kiciyaan hababka soo kabashada;
Badeecada Calendula - waxay leedahay saamaynta anti-bararka, waxaa loo isticmaalaa in laga takhaluso finanka xafaayadda, dildilaaca on cirbadaha. Baalsheetkan calendula waxaa ku jira tincture calendula iyo waliba;
Saliid Calendula - wuxuu yareeyaa bararka, wuxuu kor u qaadayaa dib u soo nooleynta nabarrada, gubashada, xoojiya habka bogsashada, burburiya staphylococcus streptococci.
Isticmaalka kalendarka ee masaajidka
Calendula waxaa jecel dumarka badan oo ka shaqeeya xaalada jirkooda. Xaqiiqdu waxay tahay in geedkaani uu saameyn aad u wanaagsan ku yeesho isbedelka da'da la xiriira da'da, wuxuu burburiyaa dhibco gaar ah, laaluushka, wuxuu bixiyaa daryeelka daryeelka maqaarka xasaasiga ah wuxuuna ka nadiifiyaa dhibaatooyinkaas sida finanka. Taasi waa sababta calendula loo isticmaalo in lagu xanaaneeyo maqaarka wejiga iyo gacmaha.
Isbedelada da 'da la xiriira ee la xidhiidha da'da sida dhirta wanaagsan ayaa la daaweyn karaa decoction calendula. Waayo, waxaad u baahan doontaa hal shaah oo ah marigold qalalan iyo 200 ml oo biyo ah. Ku buufin isku dar ah ilaa 15 daqiiqo oo subax kasta subax kasta. Waxa kale oo aad xakameyn kartaa maraqana ku dhejin kartaa kalluunka.
Dagaalka lagula kaco gabowga waa badanaa la isticmaalaa masaasado ku saleysan calendula. Waxaa loo diyaariyey hal qaado oo ah oatmeal iyo hal qaado oo ah ubaxyo la qalajiyey oo dhirta, kuwaas oo si taxaddar leh u wada siman. In isku dar ah, waa in aad ku dartaa biyo yar oo karkaraya si joogta ah waa mid muuqda. Codso inaad wajahdo oo hayso 20-30 daqiiqo.
Si looga takhaluso dhibco iyo lafdhabarta, isku dar dabka liin iyo tincture calendula. Isku darkaani waa mid si joogta ah loola dhaqmay.
Si aad u daryeesho maqaarka jilicsan, saliidda calendula waxaa loo isticmaalaa. Waxay ka ilaalinaysaa maqaarka gubashada xagaaga kuleylka, waxay ka yareeyaan barar, iyo jeermiska maqaarka.
Dagaalidda finanku waa suurtogal in la caawiyo faleebada kalendula oo ku saabsan khamriga, la hadla leh calendula, cadaadis. Waxtarka ugu fiican ee arrintani waa tincture khamriga.
Waa muhiim! Faleebada khamriga ee ku saleysan calendula waa in la barbar dhigaa, oo si xeeldheer u ah meelaha dhibaatadu ka jirto, sida khamrigu u engego maqaarka.
Sidee loo isticmaalaa kalendarka karinta
Muuqaalka, carafka iyo dhadhanka kalendula ma aysan dhicin wax cunto karis ah. Qarniyo badan, ubaxkan waxaa lagu daraa salad kala duwan, maraqa, suxuunta.
Qosolka isticmaalaya calendula, kuwaas oo, sababtoo ah calendulin walax oo ku jira dhirta, ku siin cajiinka iyo kiriimyada hoonaha dahabka ah. Calendula waxay ka baxdaa marxaladda rosette waxaa lagu daraa maraqa, saladhka, godadka, suxuunta cagaaran, hilibka iyo kalluunka.
Kalendimooyinka isticmaalka Kalendula ee karinta:
Salad barandho ah. Khudrado badan ayaa si fiican u la socda calendula: qajaarka, baradhada la kariyey, karootada, basasha cagaaran. Salad calendula waxaa laga buuxin karaa labeen dhanaan, saliidda cuntada;
Sandwiches. Si aad u diyaarsato, isku darka saliidda, sonkorta iyo qoryaha kalendula. Isku darkaani wuxuu ku faafaa rootiga, sandwich waa diyaar.;
Cabitaannada. Ubaxyada kalendula qalalan ku shub biyo karkaraya, karkari mar kale oo adkeyso. Maraq noocan oo kale ah ayaa lagu qasi karaa cabitaanka tufaaxa, cabitaanka viburnum, malab ama sonkorta ayaa lagu daraa cabitaannada caafimaad leh ee caafimaad lehna waa la helaa.;
Shuban. Ubax iyo shandada calendula dhulka la kariyey 5 daqiiqo, sifeeyaa, sonkorta ayaa lagu daraa. Ka dib markaad qaboojisid, ku dar vodka oo ah saamiga 1: 3 - 1 qayb ahaan maraq, 3 qaybood oo ah vodka;
Kaluunka la kariyay iyo cusbayn. Wixii salting waxaad u baahan tahay inaad ku darto 60 garaam oo cusbo ah iyo hal kiilo oo ubax ah calendula ilaa nus litir oo biyo ah. Karkari dhererka shan daqiiqo - salting waxaa loo tixgelin karaa diyaar. Weli waa lagu shubayaa dhalooyinka laisugu shubay. Si aad u lumiso Calendula, waxaad u baahan tahay hal kiilo oo inflorescences ah, 9% suufka (150 ml), cusbo 40 g, basbaaska 2 g. Isku darka dhammaan walxaha iyo sugitaanka 5 daqiiqo, halbeegga waxaa loo tixgelin karaa diyaar u ah isticmaalka.
Ma taqaanaa? England, calendula daawada waxay u dhigantaa isbinaajka, waxay xitaa hal mar la kariyey. Buug-gacmeedka ku yaala maxkamadda boqortooyada, marigolds waxay ahayd xayiraad aan loo baahnayn oo laysku qurxiyo iyo shimbiro.
Contraindications in isticmaalka kalendula
Marka lagu daro calaamadaha loo isticmaalo, waxaa jira waxyaabo ay ka mid yihiin ubaxyada calendula isticmaalka. Kuwaas waxaa ka mid ah xaaladaha soo socda:
dulqaad la'aanta qaybaha;
uurka - ma sameyn kartid inaad dejiso, qaadato casiirka geedka, ama u adeegso hab kale, sababtoo ah taasi waxay kordhin kartaa sunta sunta, ama xataa waxay u horseedi kartaa dhicis;
isla markiiba dhalashada kadib ama ilmo iska soo ridid;
boodboodka - dhirta ayaa leh saameyn hooseysa;
isticmaalka isku-dabiiciga ah ee sedatives, barbiturates;
ka sii daridda cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka;
carruurta ka yar 12 sano.
Isku-xirnaanta marigold waa in la tixgeliyaa, go'aaminta isticmaalka mukhaadaraadka leh calendula. Is-daryeeliddu sidoo kale waa mid aan loo baahnayn, sababtoo ah marka hore waxaad u baahan tahay inaad la tashato dhakhtarkaaga.
Calendula si sax ah xaq ayuu u leeyahay magaca mid ka mid ah warshad caalami ah, waa daweyn, waxaa loo isticmaalaa cuntada, wuxuuna ku siinayaa farxad raaxo leh. Waxa ugu muhiimsan waa in si sax ah loo daboolo oo isla markaaba looga saaro iyada oo la joogayo khilaafka.